Induction Kuchenesa Principle | Dzidziso, Chii chinonzi kutengesa kupisa?
Chii chinonzi Induction Heating?
Induction Kutya ndiyo inopisa kupisa chinhu chinokonzera magetsi (kazhinji simbi) neyemagetsi emagetsi, apo magedhi eddy (anonziwo Foucault currents) anogadzirwa mukati mesimbi uye kushorwa kunotungamirira kuJoule kupisa kwesimbi.Induction Kutya iri chimiro che kwete kushamwaridzana kupisa yekutengesa zvinhu, kana kushandura kwemazuva iko kunopinda mumakumbo akaumbwa, kusiyanisa magetsi emagetsi zvakasungirirwa zvakakomberedza coil, kuparadzanisa ikozvino (induced, current, eddy current) inogadzirwa mu workpiece (conductive material), kupisa kunobudiswa se eddy ikozvino inoyerera kurwisana nekusimba kwemashoko.
An induction heater (chero ipi zvayo) inosanganisira induction coil (kana kuti electromagnet), iyo inoshandiswa yakakwirira-inoshandiswa ikozvino (AC) yapfuura. Kupisa kunogonawo kugadzirwa nemagnetic hysteresis kurasikirwa muzvinhu izvo zvine chiremera chakakosha chekuita.
Kuwedzerwa kweAAC kushandiswa kunoenderana nehukuru hwechinhu, chimiro chezvinhu, kubatanidza (pakati pebasa coil uye chinhu chinopisa) nekudzika kwekupinda.
High Frequency Induction kupisa iyo nzira inoshandiswa kusunga, kuomesa kana kunatsiridza simbi kana zvimwe zvinogadzirisa zvinhu. Kuwanda kwemazuva ano maitiro ekugadzira, kupisa kwekutsvaga kunopa humwe hunoyevedza hwekukurumidzira, kusagadzikana uye kutonga.
Induction Kutya inokurumidza, yakachena, isina kusvibisa fomu inopisa iyo inogona kushandiswa kupisa simbi kana kuchinja maitiro ekufambisa. Ikopi yacho haitonhi uye moto unotonhora uri pasi pekutungamirirwa. Iyo yakasimba nyika transistor teknolojia yakagadzira induction heat zvinoreruka zvikuru, zvinodhura zvinotonhora zvinoshandiswa zvekushanda kusanganisira soldering uyeindisi yekusungurudza, kutengesa kupisa kupisa, kushandiswa kwezvinyorwa, kuburitswa kwezvinyorwa.